स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकै कारण श्रीमानबाट मरणासन्न हुनेगरी कुटि अस्पताल भर्ना::KhojOnline.com
स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकै कारण श्रीमानबाट मरणासन्न हुनेगरी कुटि अस्पताल भर्ना
बैशाख, पोखरा । आजभन्दा १२ वर्षअघि अन्तरजातीय विवाह गरेकी कास्कीको रुपा गाउँपालिकाकी पद्मा क्षेत्री गुरुङले चुनावमा उम्मेदवार बनेकै कारण आफ्नै श्रीमानबाट मरणासन्न हुनेगरी कुटिन्छु भनेर सायदै सोचेकी थिइन् । तर, स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकै कारण उनी अस्पताल भर्ना हुने अवस्थामा पुगिन् ।
स्थानीय चुनावले महिलाहरुलाई अधिकार र अवसर दुबै दिएको छ । तथापि चुनावमा मनहरु विभाजित हुन्छन् । एउटै परिवारका सदस्यहरु समेत भिन्नाभिन्नै दलमा लाग्न सक्छन् । र, भिन्नाभिन्नै दलबाट उम्मेदवारसमेत बन्न सक्छन् । तर, लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन नसकेको समाजमा यसले पदमाको परिवारमा जस्तै घरपरिवारभित्र झगडा निम्त्याउँछ ।
कास्कीको रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की महिला वडा सदस्य उम्मेदवार पदमा क्षेत्री गुरुङका लागि यो स्थानीय श्रीमानबाटै चुनाव कुटाइ खाने दुर्भाग्यपूर्ण दिका रुपमा परिणत भयो ।
स्थानीय चुनावले लोकतन्त्र र अधिकारको अभ्यास हुनुपर्ने ठाउँमा पदमाको घरभित्रै झगडा र कुटपिट निम्त्यायो ।
रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ की महिला उम्मेद्वार पदमा आफ्नै श्रीमानबाट कुटिएकी हुन् । सोही वडाको वडाध्यक्षमा टेकबहादुर गुरुङले उम्मदेवारी दिएका थिए, जो पदमाका जेठाजु हुन् ।
वडाध्यक्षमा उठेका जेठाजु टेकबहादुरको भन्दा फरक पार्टीबाट भाइबुहारी पद्मा क्षेत्री गुरुङले सोही वडामा महिला वडा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिइन् । बुहारीले भिन्नै दलबाट चुनाव लडेपछि जेठाजु रीसले आगो भए ।
जेठाजुले बुहारीलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन भाइ यामबहादुर गुरुङमार्फत दबाव दिए । तर, पदमाले उम्मेदवारी फिर्ता लिन मानिनन् । जेठाजुको आग्रह अनुसार उम्मेद्वारी फिर्ता नगरेको आरोपमा उनी श्रीमानबाटै निर्घात कुटिइन् ।
श्रीमानबाट कुटिएकी पद्माको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । दाहिने हातमा भित्री चोट लागेको छ । उनको उपचार पोखराको फेवासिटी हस्पिटलमा भइरहेको छ । उनको टाउकोमा चारवटा टाँका लगाइएको छ ।
उम्मदेवारी फिर्ता नलिए मार्दिन्छु भन्दै श्रीमानले घाँटी थिच्दा घाँटीमा दाग लागेको उनले देखाइन् ।
बेग्लाबेग्लै पार्टीमा लाग्दा घर झगडा
फरक पार्टी र फरक विचार भएपछि गुरुङ दम्पतीबीच बेलाबेला सामान्य भनाभन पहिले पनि हुने गथ्र्यो । क्षेत्रीकी छोरीलाई गुरुङ परिवारले कहिलेकाँहि घरको चुलो छुन नदिने, कुलपूजामा सामेल हुन नदिने लगायतका व्यवहार पहिलेदेखि नै हुने गरेको उनले गुनासो गरिन् ।
जब स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भयो । एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले रुपा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्षमा पदमाका जेठाजु टेकबहादुर गुरुङलाई उठायो । अर्को कम्युनिष्ट पार्टीले बुहारी पद्मालाई सोही वडाको महिला वडा सदस्यमा उम्मेद्वार बनायो ।
उम्मेद्वार नै भएपछि पद्मा चुनाव प्रचारमा लाग्न थालिन् । घरकै सदस्य विपक्षमा लागेर अर्को दलको प्रचारमा जुटेको भन्दै टेकबहादुरले पद्माका श्रीमान अर्थात आफ्नो भाइ यामबहादुरलाई आफ्नी श्रीमतीलाई सम्झाउन चेतावनी दिए ।
पदमाका श्रीमान यामबहादुर पोखरा लेकसाईडको कुटी रिसोर्टमा सुरक्षा गार्डको काम गर्छन् । दाजुले बोलाएपछि घर पुगेका यामबहादुरले घरमा पुगे लगत्तै पद्मालाई हातखुट्टा भाँचेर भए पनि दाजुलाई चुनाव जिताउँछु भने ।
बाहिर भाँडा माझिरहेकी पद्माले यो कुरा सुनेपछि त्यसो नभन्न र आफूलाई स्वतन्त्र रुपमा चुनाव लड्न दिन आग्रह गरिन् ।
त्यसपछि यामबहादुरले बुबाका घरमा पूजा छ भन्दै पद्मालाई त्यहाँबाट लिएर हिँडे । बाटामा भेटिएका मानिसहरुसँग पदमाले आफूलाई भोट दिन आग्रह गरिन् । त्यहीबेला यामबहादुरले आफ्नी श्रीमतीलाई देखाउँदै यसको पार्टीको अनुहार पनि हेर्न मन लाग्दैन भन्दै गाली गरे ।
जवाफमा पद्माले तपाईं दाजु टेकबहादुरलाई जिताउन लाग्नुस्, म आफ्नो तरिकाले चुनाव लड्छु भन्दा तलाई मार्दिन्छु भन्दै पिट्न खोजेपछि मानिसहरुले छुट्याए ।
लगत्तै उनले पदमालाई घरमा लिएर आए । घर पुगेर कोठामा पस्ने वित्तिकै उनले घाँटी थिचेर मार्ने कोशिस गरेको र आफू उम्किएर बाँच्न सफल भएको पद्माले बताइन् ।
पिटाइ खाएपछि दिउँसो नजिकैको झाडीमा लुकेकी उनी राती घर जाँदा पछाडिबाट बाँसको चिर्पटले टाउकोमा ३ पटक र ढाड तथा हातमा प्रहार गर्दा आफू घाइते भएको उनको भनाइ छ ।
कुट्नका लागि सासू र देउरानीले समेत सहयोग गरेको पद्माको आरोप छ ।
हात भाँचिनुका साथै रगताम्मे हुने गरी कुटिए पनि उनलाई कसैले उद्धार गरेन । उनी बुधबार राति पुरानो घरमा रात काटेर विहीबार बिहान अस्पताल आएकी हुन् ।
उनले पिटाइ खाए पनि कुनै पनि हालतमा उम्मेद्वारी फिर्ता नलिने अडान दोहोर्‍याएकी छिन् । उनले हारको मानसिकताबाट ग्रसित भएर जेठाजुले आफूलाई कुटाएको गुनासो गरिन् । उनले उपचारपछि कारवाहीका लागि प्रशासनमा उजुरी दिने बताइन् । उनले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको पनि दाबी गरेकी छिन् ।
शुक्र, बैशाख २९, २०७४ मा प्रकाशित
माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम गर्न नदिने गरी सरकारले लगाएको निशेधाज्ञा फिर्ता लिनुपर्ने — डा. केसी
वैशाख, काठमाडौं ।लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा खोज अनलाइन संग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै डा. केसीले भने– ‘अहिले दुईतिहाइवाला सरकार छ । सबै पार्टीहरु आफूलाई प्रजातन्त्रवादी लोकतन्त्रवादी भन्छन् । यिनीहरु आफूलाई समाजवादी भन्छन्, साम्यवादी भन्छन् । तर, यिनीहरु न समाजवादी हुन्, न साम्यवादी हुन् । यिनीहरु लुटतन्त्रवादी हुन्...